Kumaa ku biiriyay qaabeynta gaariga maxalliga ah? | RayHaber | raillynews
HomeGUUDKumaa ku biiriyay qaabeynta baabuurka guriga?
30 / 12 / 2019 GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, baabuurta, TURKEY
Waa kuma Murat Günak
Murat Günak wuxuu ku dhashay magaalada Istanbul sanadki 1957. Waa ninkii hore naqshadeeyaha Volkswagen iyo Mercedes-Benz.
Kadib markii uu ka qalin jebiyey dugsiga sare ee Istanbul, Günak wuxuu bartay naqshadda wershadaha Hochschule für Bildende Künste (Akadeemiyada Farshaxanka Farshaxanka) ee Kassel. Ka dib wuxuu ka shaqeeyay Royal College of Art ee London, isagoo hoos imaanaya Claude Lobo iyo Patrick Le Quément, kuwaas oo lagu abaalmariyay abaalmarinta Master of Automotive Design oo ay maalgalisay Ford. Markii uu qalin jebiyey ka dib, wuxuu ka soo shaqeeyay Ford Jarmalka laba sano ka dibna wuxuu naqshadeeye ka ahaa Mercedes-Benz muddo 8 sano ah. Halkan, wuxuu naqshadeeyay moodhadii Mercedes ee ay soo saartey intii u dhaxeysay 202 iyo 2000 codeynta W2007.
Sanadkii 1994, waxaa loo magacaabay madaxa naqshadeynta Peugeot. Muddadan, wuxuu ku jiray marxaladda naqshadda ee Peugeot 206 model. Iyada oo la adeegsanayo naqshadeynta 206, waxay noqotay magac caan ku ah adduunka oo dhan. Kadib 206 naqshadood, wuxuu sidoo kale kaqeyb qaatay geedi socodka nashqadeynta ee 307 iyo 607 moodelkii astaanta Faransiiska.
Daraasadihii Peugeot ka dib, Murak Günak wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo shirkadda Mercedes, halkaasoo uu ugu talagay Maybach Coupe model oo ay ku xafiiltamaan Bugatti EB-118 iyo nooca Coupees C Series. Sanadkii 1998, wuxuu noqday Madaxweyne kuxigeenka Mercedes-Benz iyo DaimlerChrysler dhamaan baabuurta rakaabka ah.
Bishii Abriil 2003, wuxuu ku biiray kooxda naqshadeynta kooxda Volkswagen wuxuuna noqday Maamulaha Naqshadeynta. Halkan wuxuu ka shaqeeyey nashqadeynta naqshada Golf Plus, Passat iyo Phaeton.
Volkswagen kadib, Günak wuxuu ka shaqeeyay nashqadeeyaha gawaarida Hybrid ee shirkad la yiraahdo Mindset. Mashruuca gaari-ku-daweynta isku-dhafan, oo uu isagu madax u ahaa, wuxuu soo saaray wadar ahaan 800km (batrool + koronto).
Kadib Mindset AG, Günak wuxuu ka qeybqaatey mashruuc gaadiid cusub oo koronto oo loogu magac daray Koronto Mia Electric üret ee Faransiiska intii u dhaxeysay 2011-2013
Mar dambe, wuxuu ka shaqeeyey shirkadda gawaarida korontada iyo dhaqdhaqaaqa ee Tretbox iyo tikniyoolajiyadda Türk Ono iyo shirkadaha jilitaanka.
Ugu dambeyntii Gunak magaca Car ee Turkey sameeyey bandhig on December 27 Venture Group waxaa laga maqlay in soo jeedinta.
Mercedes SLK, Mercedes C Series, Peugeot 206, Volkswagen Eos iyo Volkswagen Golf GTI ayaa ka mid ah noocyada gawaarida waaweyn ee uu u qorsheeyay.
Waxaan jecelahay inaan hambalyeeyo naqshadeeyaha Turkiga ee guuleysta Murat Günak waxaan u rajeynayaa inuu sii wado guusha.
Abaalmarinta kuwa ku biiray line-ka Ankara-Istanbul ee YHT
Murat Kavak, Waa inaadan fursad u helin inaad abaabulato wax soo saarka degaanka
TÜDEMSAŞ Maamulaha Guud ee Yuryaray Koçarslan
Lütfi Elvan waa wasiirka gaadiidka cusub!
Yaa Nuri Demir Dag